Ntuziaka onye na-azụ ihe traktọ (Nkebi nke 1 - JCB) - Magazin Sistemu Nduku
Isi Omume / Etu Agrotechnology
Ntuziaka ndị na-azụta traktọ (Nkebi nke 1 - JCB)
в Agrotechnology, Omume / Etu, Injinia / Teknụzụ
FASTRAC 4000 Series Traktọ bụ ụdị emelitere nke na-eme ka akara JCB dịkwuo elu. Ha na-egosipụta ọtụtụ ihe mgbakwunye maka iji traktọ kacha mma, oke ọsọ n'ọhịa na n'okporo ụzọ nwere nkwusioru ọkaibe na breeki maka nkwụsi ike onye ọrụ traktọ, nchekwa na nkasi obi.
A na-eji ya nke ọma na njikọ AMAZONE UF 1501 na-ebunye sprayer na ọganihu 18 m. Igwe a na-eji tankị 1500 lita yana AMAZONE FT 1001 "ngwugwu n'ihu" nke na-agbakwụnye tankị 1000 lita n'ihu igwe. Iji hụ na arụ ọrụ kwụsiri ike, AMAZONE UF 1501 spray system na-ekpochapụ tankị n'ihu na azụ n'otu ọsọ ahụ.
Mgbe ị na-agba mmiri, nkwusioru traktọ na-enye gị ohere ịmepụta ọsọ dị elu na-enweghị ịgbanye sprayer. Igwe ahụ nwere ike ịgbasa ọsọ nke ihe dịka 26 km / h - ebe wiil traktọ na-agbago na bumps, sprayer na-anọgide na-eguzo kpamkpam ma na-anọgide n'otu elu ahụ n'elu ala mgbe niile. Nke a na-ebelata iyi akwa.
JCB nọ na-arụ akụrụngwa ugbo kemgbe 1945, mgbe Joseph Cyril Bamford rụrụ ụgbọ ala ugbo mbụ ya.
Nke a bụ ya mere ụlọ ọrụ ahụ ji kwenye mgbe nile na mmepe nke ngwá ọrụ ugbo pụrụ iche; Ewebata ndị na-ahụ maka ọrụ ugbo na 1977, ndị na-ebu wiil ndị ọrụ ugbo na 1983, na traktọ Fastrac na 1991.
Ụlọ ọrụ ahụ na-agbakwa mbọ mgbe niile iji ihe ọhụrụ na teknụzụ mee ka ngwá ọrụ ugbo anyị dị irè dị ka o kwere mee. Na 2006, ọ webatara TorqueLock iji kwalite akụ na ụba mmanụ ọkụ na ịbawanye ọsọ ọsọ. N'afọ 2010, ụlọ ọrụ ahụ kwadoro njikwa ibu mgbanwe iji melite nchekwa na nkwụsi ike nke igwe telescopic. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ ewebata LiveLink, usoro telematics maka nlekota ojiji igwe na ọnọdụ.
Traktọ Fastrac 8330 na-ebuga ọsọ, nkasi obi, arụmọrụ, nchekwa na ịdị iche maka azụmahịa gị. Site na oke ọsọ nke 43 mph, otu n'ime ike kachasị mma na nkwusioru nkwusioru na ụlọ ọrụ ahụ, usoro ụzọ ụgbọ mmiri hydrostatic ọhụrụ na mgbochi mkpọchi siri ike, Fastrac 8330 dị njikere maka ọrụ siri ike. Traktọ ahụ na-enye ọtụtụ nhọrọ mgbakwunye karịa traktọ ọ bụla ọzọ na klaasị ya ma nwee otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kachasị na nke kachasị mma na ahịa.
Site: Akụkọ Nduku
Tags: JCBndị na-akụ azụtraktọ
Ndị nwe ala Russia: afọ iri abụọ kachasị ọnụ na Russia. Nye ọkwa Forbes
SERCOM: kọmpụta ihu igwe, maka mpaghara ọrụ ugbo nke Russia